မဒေါင်းလုပ် ExpressVPN APK မအဘို့ Android
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Android (79.50 MB)
ExpressVPN အပလီကေးရှင်းသည်၎င်းတို့၏ Android စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိလုံခြုံစွာ ၀ င်ရောက်လိုသူများအတွက်ရှာဖွေနိုင်သော VPN application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတစ်ရက်သာအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးသော်လည်းတစ်ရက်တာကာလပြီးနောက်သင်အခကြေးငွေအတွက်ရက် ၃၀ အစမ်း ၀ ယ်ယူနိုင်သည်၊ ဤအပလီကေးရှင်းကိုသင်မကျေနပ်လျှင်သင်၏ငွေကိုပြန်ရနိုင်သည်။ ချက်ချင်း ထို့ကြောင့်ပင်မအစမ်းကာလသည်ရက်သုံးဆယ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်းကို install လုပ်ပြီးနောက်သင်များစွာသောဆက်တင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ သင်လုပ်ရန်မှာ VPN ကိုအသက်သွင်းရန်သာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဆာဗာများရှိသောအပလီကေးရှင်း၏အဓိက VPN ဆာဗာများသည်အောက်ပါနေရာများတွင်တည်ရှိသည်။
WiFi နှင့် 3G ဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင်လည်ပတ်နိုင်သောအပလီကေးရှင်းသည်သင်၏အင်တာနက်ဒေတာများကို encrypt လုပ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်လွှဲပြောင်းနေစဉ်ကာကွယ်ခြင်းကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အများပြည်သူသုံးနေရာများတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစွာသိနိုင်သည်။
၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူကဖော်ပြထားသည့်အပလီကေးရှင်းသည်သုံးစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမသိမ်းဆည်းဘဲတတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မမျှဝေပါက၎င်းအားအကန့်အသတ်မဲ့ bandwidth ပေးထားသောကြောင့်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသင်သုံးခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာတီဗီစီးရီးနဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုဒ်တွေကိုသုံးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေကဒီအကန့်အသတ်မဲ့ bandwidth feature ကနေအများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မဖိုင်အရွယ်အစား: 79.50 MB
တီထွင်သူ: Express VPN
ExpressVPN အပလီကေးရှင်းသည်၎င်းတို့၏ Android...
SuperVPN Free VPN Client သည် Android အတွက်အခမဲ့ VPN app ဖြစ်သည်။ SuperVPN၊ Android...
NightOwl VPN သည် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်မြန်ဆန်။ လုံခြုံမှုရှိပြီးတည်ငြိမ်။ လွယ်ကူသော VPN...
Secure VPN သည်အလွန်မြန်ဆန်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအားအခမဲ့ VPN...
CM Security VPN ဖြင့်သင်၏ Android ထုတ်ကုန်များမှတားမြစ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင်၏...
Solo VPN application နှင့်သင်၏ Android ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ...
SuperNet VPN သည်အခမဲ့ပြီးအရွယ်သေးသော VPN application တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။...
Oneday VPN သည်ပရီမီယံဆာဗာတည်နေရာ ၂၆ ခုနှင့်အခမဲ့မြန်နှုန်းမြင့် server တည်နေရာ ၁၃ ခုကြား IP...
Tornado VPN အက်ပလီကေးရှင်းသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာအသွားအလာကိုပေးသည်၊ ပိတ်ဆို့ထားသော ၀...
Total VPN သည်သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်တွင်အင်တာနက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သော VPN...
Firefox Private Network VPN သည် Mozilla ၏မြန်ဆန်လုံခြုံပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော VPN app ဖြစ်သည်။...
GeckoVPN အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ Android စက်များတွင်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိ VPN ၀...
Turbo VPN Lite သည် Android ဖုန်းများအတွက်အခမဲ့နှင့်မြန်မြန် VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Thunder VPN သည် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် အထူး VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Google...
VPN သည် အသုံးပြုသူများအား ပိတ်ဆို့ထားသော ဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်...
Express VPN သည် သင့် Android မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် ၎င်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းဖြင့်...
Rocket VPN အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android အသုံးပြုသူများအတွက် VPN အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာပြီး...
ZPN Connect VPN သည် လုံးဝအခမဲ့မဟုတ်သော်လည်း အခမဲ့ဟု ယူဆနိုင်သော ရေပန်းစားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော VPN...
Private Internet Access မှ VPN သည် Android မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းရှိ အောင်မြင်ပြီး...
Hola VPN အက်ပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏ Android စမတ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များကို အသုံးပြု၍...
VPN Master သည် Android ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက်...
Opera VPN သည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ ပိတ်ဆို့ထားသော သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ထားသော ဆိုက်များကို အလွယ်တကူ...
Ultrasurf VPN ဖြင့်၊ သင်၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ် စက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်သို့...